မြန်မာမွတ်စလင် အထိကရုန်းများသည် စစ်တပ်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို မလိုလားသော ခေါင်းမာသူများရဲ့ လက်ချက်ဖြစ်သည် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Buddhist Monks and Rakhine protest shelter built for displaced Rohingya
UPDATE ON SITTWE IDP AREA INCIDENTS WITH IMMIGRATION AND SECURITY FORCES »
မြန်မာမွတ်စလင် အထိကရုန်းများသည် စစ်တပ်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို မလိုလားသော ခေါင်းမာသူများရဲ့ လက်ချက်ဖြစ်သည်
၁။ မြန်မာမွတ်စလင် အထိကရုန်းများသည် စစ်တပ်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို မလိုလားသော ခေါင်းမာသူများရဲ့ လက်ချက်ဖြစ်သည်ကို သံသယမရှိ။
၂။ မွတ်စလင်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာကို တိုက်ခိုက်နေပြီ။ ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးတွေကိုလည်း အတင်းအကြပ် ရယူနေပြီဆိုတဲ့ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ အမြင်အယူတွေကို စစ်အရာရှိတွေ၊ ဝန်ကြီးတွေက ပြောနေကြတာကို ကျနော် မြန်မာပြည်ရောက်စဉ်က ကိုယ်တိုင် ကြားခဲ့ရတယ်။
၃။ အချိန်မီ အရေးမယူရင် အနောက်တံခါး ကျိုးပေါက်လိမ့်မယ်လို့ ဝန်ကြီးအဆင့်တစ်ဦးလည်း ကျနော့ကို ပြောခဲ့တယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက် လူ့အခွင့်အရေး မရှိဘူးလို့ အဲဒီဝန်ကြီးက ယုံကြည်နေတယ်။
၄။ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေးက တရုပ်ဆန့်ကျင်ရေး မဖြစ်လာအောင် တစ်ကယ်ဘဲ လမ်းလွှဲပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ မတော်မတရား အမြတ်ထုတ်နေတဲ့ တရုပ်တွေကို အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေက မနှစ်မြို့ကြဘူး။
၅။ ကုလသမဂ္ဂတာဝန်ခံများကလည်း မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး အထိကရုဏ်းတွေမှာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်း ပြောနေကြပြီ။
၆။ မြန်မာဘင်လာဒင်လို့ခေါ်တဲ့ ဘုန်းကြီးဦးဝီရသူ၏ မွတ်စလင်မုန်းတီးရေး ဗြောင်လှုံ့ဆော်မှုများကို အစိုးရက အရေးမယူဘူး။
၇။ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်သူများကို လမ်းပေါ်မှာတင် မဟုတ်။ လွှတ်တော်အတွင်းမှာ၊ စစ်တပ်အတွင်းမှာ၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေမှာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ အနှံ့အပြားရှိနေတယ်။ အချို့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေဆို လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အစွန်းရောက်များ မွေးထုတ်ပေးနေကြပြီ။
၈။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယခုထက်ပိုပြီး ပြောဖို့လိုပြီ။
၉။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က အခုလို အကြမ်းဖက်မှုတွေကို အမြန်ရပ်ပြီး၊ အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုကို မတည်ဆောက်ပေးနိုင်ဘူးဆိုလျှင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအကြားမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ (အရင်ကလိုဘဲ) အထီးကျန်ပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
(နယူးယော့တိုင်း သတင်းစာမှာ ဧပြီလ (၂၄) ၂၀၁၃မှာ ကိုအောင်ဇော်ရဲ့ ရေးသားချက်အချို့မှ ကောက်နှုတ်ချက်များ)
Translated by Aung Tin
http://www.nytimes.com By AUNG ZAW
Anti-Muslim violence is no accident but the product of an effort led by army hard-liners to thwart both reforms and Myanmar’s opening to the outside world.
A version of this op-ed appeared in print on April 25, 2013, on page A31 of the New York edition with the headline: Are Myanmar’s Hopes Fading?.
This entry was posted on April 26, 2013 at 7:21 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.